Diyaarad Yahuuda Looga Soo Riday Suuriya Iyo Yahuuda Oo Ka Jawaabay. – Bogga Calamada.com
Diyaarad Yahuuda Looga Soo Riday Suuriya Iyo Yahuuda Oo Ka Jawaabay.
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka dowladda iiraan ay dhulka soo dhigeen diyaarad dagaal oo ay leedahay Yahuudda saacado kadib markii ‘israa’iil’ ay ku dhawaaqday in ay soo ridday diyaarad Drone ah oo iiraan leedahay.
Afhayeenka u hadlay Melleteriga waxa loogu yeero dowladda Israa’iil ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in madaafiic kasoo dhacday gudaha wadanka Suuriya ay sababtay soo dhicidda diyaarad F16 ah oo iyagu ay leeyihiin wuxuuna weerarkaas ku eedeeyay in dowladda Iiraan ay Mas’uul ka tahay.
Goob joogayaal ku sugan gobolka Alquneydarah ee Koonfurta Suuriya ayaa warbaahinta u sheegay in ay maqlayeen jugta qaraxyo waaweyn oo ka dhashay duqeymo diyaaradaha Yahuudda ay ugeysteen saldhigyo ay ku sugnaayeen Maleeshiyaadka dowladda Iiraan daqiiqado kadibna waxaa lasoo riday Diyaaraddii duqeynta geysatay oo nuuceedu ahaa F16.
Afhayeenka u hadlay Maamulka Yahuudda ayaa dowladda iiraan ku eedeeyay in dagaal ay ka abuurayso mandiqadda Bariga dhexe wuxuuna sheegay in Jawaab kulul ay ka bixi doonaan weerar daan daansi ah oo uu sheegay in dhanka iiraan uu uga yimid.
Dhanka kale Maamulka Sahyuuniyadda Yahuuda ayaa ku dhawaaqay in Jawaab adag uu ka bixiyay diyaarad dagaal oo loogasoo riday xuduud beenaadka ay wadaagaan dhulalka Filasdiin iyo Suuriya.
Afhayeen u hadlay melleteriga Yahuudda ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in diyaarad nuuceedu yahay F16 lagusoo riday mandiqadda Jowlaan kadib markii lagasoo toogtay dhanka Suuriya.
Yahuudda ayaa dowladda Iiraan iyo maamulka Bishaar Al-asad ku eedeysay in ay dhulka soo dhigeen diyaaradda, Avijaa Adraei oo ah Afhayeenka Melleteriga Yahuudda ayaa sheegay in labadii duuliye ee diyaaradda ay baarashuud ku boodeen balse mid kamida uu qabo dhaawac halis ah.
Duqeymo Ba’an oo ay geysanayaan diyaaradaha Yahuuda ayaa lagasoo calaamadeeyay magaalada Dimishiq ee caasimadda Suuriya, illaa iyo 12 saldhig oo maleeshiyaadka Iiraan iyo ciidamada Nidaamka Al-asad ay ku lahaayeen dimishiq iyo hareeraheeda ayaa la duqeeyay.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in ay arkayeen qiic iyo uura Madoow oo cirka iskus shareeray, guutada koowaad ee ciidamada ilaalada Xarasul Jamhuuriga Bishaar al-asad ayaa la xaqiijiyay in duqeymo ba’an lala eegtay.
Garoonka Melleteri ee T4 oo kuyaal gobolka Homs bartamaha dalka Suuriya ayaa shaqada gabay kadib markii diyaaradaha Yahuudda ay burburiyeen qeybaha aas-aasiga ah ee garoonka.
Dhinaca kale dowladda Shiicada Iiraan oo Jawaab kasoo saartay xiisadda Suuriya ayaa sheegtay in ‘Muqaawamadu’ aysan ogolaan doonin duullaanka cadawtooyo ee Sahyuuniyadda Yahuuda.
Madaxa amniga qaranka Iiraan ayaa uga digay Yahuudda in aan loogu dulqaadan doonin daan daansiga Suuriya islamarkaana Jawaab kulul ay ka bixin doonaan marwalba oo ay duqeyn ka geysato gudaha wadankaasi